Log Thrower Apk ho an'ny Android  | APKOLL
Log Thrower Apk ho an'ny Android 
Salama daholo, tafaverina miaraka amina rindranasa mahavariana iray hafa izahay izay fantatra amin'ny anarana hoe Log Thrower Apk. Io no lalao arcade tsara indrindra nilalao hatrizay. Lalao tsotra io, izay mila manamboatra hazo maranitra, izay tsy maintsy manipy anao ary mahazo ny tanjonao amin'ny alàlan'ny sakana samihafa.
Araka ny fantatrao, amin'izao andro izao dia misy lalao maro eny an-tsena izay azonao lalaovina. Fa zava-dehibe ny ahazoana fialamboly amin'ny karazana lalao. Izahay dia nitondra anao ity rindranasa ity izay manome fialamboly tsara indrindra ho anao.
Lalao tsotra ny milalao, fa raha vao nanomboka nilalao ity lalao ity ianao dia tsy azo atao ny manakana ny tenanao tsy hilalao azy. Betsaka ny olona mahita azy ho sosotra noho ny pop-up dokambarotra. Noho izany, hizara fomba iray ahafahanao milalao ity lalao ity izahay raha tsy misy doka.
Betsaka ny endrika mampiavaka an'ity rindranasa ity izay hozarainay aminao. Noho izany, mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy hahafantarana bebe kokoa momba izany. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao dia azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Topimaso momba ny Log Thrower Apk
Izy io dia lalao arcade Android maimaim-poana, izay novolavolain'ny Playgendary Limited. Amin'ity lalao ity dia mila manamboatra hazo maranitra miaraka amin'ny zavatra samihafa ianao, izay tsy maintsy atsipinao amin'ilay kendrena. Tokony hizara izany amin'ny fomba tsara ianao. Raha tsy maranitra araka ny tokony ho izy ny hazo dia tsy ho azonao ny tanjonao.
Rehefa voarara ny log dia momba ny canon daholo izany. Hiseho ao anaty tafondro ny log ary hahazo metatra ianao, izay mihetsika hatrany. Tsy maintsy maka sary ianao rehefa mahatratra ny ambony indrindra amin'ny metatra ny metatra canon. Hanipy ny hazo avy hatrany amin'ny sakana ho an'ny fanalahidy.
Amin'ny voalohany, mila manana iraka mora ianao, miaraka amin'ny famitana ny iraka tsirairay. Hahazo valisoa vitsivitsy ianao toy ny vola madinika, lakile ary zavatra hafa. Azonao atao ny mampiasa azy ireo hividy vokatra hafa amin'ny magazay, izay azo amidy.
Ao amin'ny Shop ianao dia hahita vokatra samihafa toy ny canons, vato misakana, hazo hazo, sns. Misy fomba roa samy hafa amin'ny ankapobeny, izay ahafahanao mividy amin'ny magazay. Ny fomba voalohany dia ny vola madinika, izay ahafahanao mahazo zavatra samihafa ho takalon'ny vola madinika
Ny fomba faharoa dia amin'ny alàlan'ny Ads, izay tsy maintsy mijery Doka 15 segondra hahazoana zavatra maimaim-poana. Raha mampiadana ny lalaonao ny doka dia azonao atao koa ny manandrana azy an-tserasera. Amin'ny fomba ivelan'ny aterineto dia tsy hahazo karazana doka ianao. Na doka tokana aza tsy hipoitra rehefa ao anaty maody ivelan'ny aterineto ianao.
Tsy maintsy manangana sarintany ianao amin'ny famitana fanamby samihafa. Amin'ny dingana voalohany amin'ity Lalao 2D, dia hanana toeram-pambolena fotsiny ianao, miaraka amin'ny ambaratonga tsirairay ary resy ny lehiben'ny fahavalo. Hanana tany vaovao hanorenana zavatra eo amboniny ianao. Izy io dia lalao mahagaga, izay ho lalaovinao.
Izy io no rakitra kinova premium, saingy renay fa misy eny an-tsena ihany koa ny kinova mod. Hizaha toetra azy izahay ary hizara izany aminareo rehetra haingana araka izay azo atao. Log Thrower Mod Apk dia ho hita tsy ho ela, tsidiho eto fotsiny.
anarana Log thrower
Anaran'ny fonosana com.mikhailp.logthrower
mpandraharaha Playgendary voafetra
Endri-javatra manan-danja amin'ny Log Thrower App
Ity no lalao tsara indrindra misy endri-javatra maro, araka ny nitanisa anay ny sasany tamin'izy ireo tao amin'ireo faritra etsy ambony. Nefa mbola misy bebe kokoa, izay holazainay aminao. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra ary aza misalasala mampiasa azy.
Mahafinaritra ny sary
Doka misy tolotra
Ahoana ny fampidinana ny log Thrower Pro Apk?
Log Thrower Apk dia hita ao amin'ny Google Play Store, fa raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy. Hanomboka ho azy ny fisintomana.
Log Thrower Apk dia fampiharana lalao mahavariana, izay ahafahanao mandany ora maro hilalaovana nefa tsy ho mankaleo. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka milalao azy. Azonao atao ny mitsidika ny anay Website ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Games, Arcade Tags Lalao 2D, Log thrower Apk, Log thrower Mod Apk, Log thrower Pro Apk Post Fikarohana
Chamet Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]